Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Blossom Houston: Echiche ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ sitere n'aka ndị isi nri abụọ Michelin nwere kpakpando
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Blossom Houston: Echiche ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ sitere n'aka ndị isi nri abụọ Michelin nwere kpakpando
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
AB Sushi na họtelu Blossom Houston
Blossom Hotel Houston, bụ Kacha ọhụrụ okomoko onwunwe na-emeghe na Houston, bụ mpako ịkpọsa ya partnered na Michelin-kpakpando chefs Ho Chee Boon na Akira Back imeghe abụọ iche iche iri nri ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ihe onwunwe na mmalite 2022. Chef Boon ga-esi n'isi duck House site. Boon, ahụmahụ iri nri sitere n'ike mmụọ nsọ nke Cantonese na-elekwasị anya na efere ọbọgwụ, ebe Chef Back ga-eweta ike kpakpando ya na nghọta Asia na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Japan nke a na-akpọ AB Sushi.
"Enwere m mpako n'iwebata ụtọ Cantonese na efere ndị na-egosipụta echiche nke oge a na ihe ndị pụrụ iche m, Chef Ho Chee Boon kwuru. "Site na Duck House nke Boon, enwere m olile anya irube isi na nri nri ebe m na-akpọkọtakwa ndị ọbịa ọnụ nri ebe ndị ọbịa nwere ike ịmepụta ncheta na-adịgide adịgide na ndị enyi na ndị m hụrụ n'anya."
Chef Boon mepere echiche ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbụ ya n'oge na-adịbeghị anya, Empress nke Boon, na San Francisco's Chinatown iji kpalie nlebanya na mmasị. Boon bụ onye isi nri nwere kpakpando Michelin nke nwere ahụmịhe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 n'ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị Eshia ama ama n'ụwa. Amụrụ na Malaysia, Chef Boon bụ onye bụbu onye isi isi mba ofesi Hakkasan wee mepee ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ya kacha ewu ewu n'ụwa niile, gụnyere Hakkasan Hanway Place na London, Yauatcha Soho London, Turandot na Moscow na Breeze na Bangkok. Ọ kwagara US na 2012 iji malite Hakkasan New York. Ọkachamara nri nri mba ofesi na-agbanwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọ bụla na nri ya ka ọ bụrụ ezigbo ahụmịhe epicurean.
Ụlọ Duck site na Boon
Usoro ọdịnala siri nri Boon jikọtara ya na ihe ndị dị ọhụrụ iji mepụta efere ndị dị ugbu a nke nwere njiri mara nri Cantonese ọdịnala na profaịlụ ụtọ. N'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ ya na Blossom Hotel na Houston, menu ga-egosipụta nke ọma nri ọbọgwụ Boon na-atọ ụtọ nke sitere na Joe Jurgielewicz & Son LTD, ugbo ọbọgwụ nke ezinụlọ nke ọgbọ nke anọ. A na-azụ ọbọ ọbọgwụ ndị a ka ha nwee ihu ọma eke dị iche na akpụkpọ anụ na-enweghị atụ nke nwere oke anụ na abụba zuru oke. Tinyere efere ọbọgwụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-enye ọkacha mmasị omenala dịka efere eghe eghe, nchikota dim, na ofe. Chef Ho na-atụ anya ịmepụta ikuku maka ndị ọbịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndị obodo ka ha nweta ezigbo ahụmihe nri Cantonese nwere nrụzigharị dị elu nke dabara na akara Blossom Hotel na mba ụwa.
Onye isi nri Akira
Chef Akira Back nke Michelin nwere kpakpando ugbu a na-ejide Pọtụfoliyo zuru ụwa ọnụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ iri na isii na-emepe ugbu a yana ebe iri ọzọ akwadoro imeghe site na 2023. Amara maka nkọwa ọhụrụ ya nke njem ụgbọ mmiri Asia na mmetụta America, ọganihu azụ na-akpali site na ọmarịcha afọ 29. culinary ndabere ọdịda ọtụtụ enọ na mba mgbasa ozi anya. N'ịmepụta omenala nke ọrụ ọkwa ụwa na ikuku nnabata, ụlọ oriri na ọṅụṅụ Chef Back na-agụnye nri mara mma nke na-egosipụta efere ọhụrụ na-agụnye akụkụ nke ndụ ya na njem ya gburugburu ụwa.
Amụrụ na Korea ma zụlite na Aspen, Colorado, Chef Back nọrọ afọ mbụ ya dị ka ọkachamara snowboarder wee malite ọrụ nri ya na-arụ ọrụ n'ụlọ nri mpaghara iji gbakwunye ego ya. Mgbe afọ asaa na sekit pro-snowboarding, Back ghọtara na ya nwere otu obi ụtọ na kichin dị ka ọ na-eme na ya osisi, na-akpụzi mkpebi ya ịchụso a nri oge ọrụ dị ka onye isi nri.
Na AB Sushi - oghere na-ekpo ọkụ, nke na-akasi obi emebere iji mee ka ihe ndị ahụ na-enwu gbaa - Chef Back ga-enye ndepụta nke sushi dị elu, sashimi adịchaghị na nri ndị Japan sitere n'ike mmụọ nsọ na ikuku congenial nke a nụchara anụcha na enweghị nkọwa. N'ịkọwa ahụmahụ ya na kichin Michelin nwere kpakpando, Chef Back ga-atọ ndị na-azụ ahịa ụtọ na menu nke na-etinye ego maka ihe ndị dị mma yana usoro na ụtọ Japanese na-emetụta nke ukwuu.
"AB Sushi na Blossom Hotel Houston ga-abụ ebe nnabata maka ndị hụrụ azụ n'anya nke palate niile na ọkwa ahụmahụ," Chef Akira Back kwuru. "Enwere m mmasị n'ịmebata ndị mmadụ na nri m ma na-atụ anya iweta menu anyị na Houston."
Ebe ebe nri nri abụọ ka atọrọ imeghe na Blossom Hotel Houston na mbido 2022. Blossom Hotel Houston dị na 7118 Bertner Avenue agbataobi NRG Stadium, Houston Museum District na ebe nkiri Houston na-ewu ewu na Texas Medical Center. Maka ntinye akwụkwọ na ozi ndị ọzọ na Blossom Hotel Houston, biko gaa na BlossomHouston.com.
Blossom Hotel na Houston
Banyere Blossom Hotel Houston
Blossom Hotel Houston, ahụmịhe mba ụwa ọhụrụ gbanyere mkpọrọgwụ na Space City n'oge na-adịbeghị anya dị nro meghere ma na-etinye ndị ọbịa naanị ebe dịpụrụ adịpụ site na azụmaahịa na ebe ntụrụndụ kacha dị na Houston, yana dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha nso na NRG Stadium, ọ dịkwa nkeji anya na Houston Museum. Mpaghara na ebe nkiri Houston ewu ewu. Ma na-eme njem maka mkpa ahụike, azụmahịa ma ọ bụ ihe ụtọ, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ụdị dị iche iche nke Houston, bụ nke a na-egosipụtakwa na ụlọ nkwari akụ nke ụlọ nkwari akụ na mgbọrọgwụ ikuku nke obodo ahụ, mgbe ị na-erite uru nke ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ chef lekwasịrị anya, ihe ndị na-enweghị atụ. na ọrụ, ọnụ ụlọ ndị ọbịa okomoko na ọtụtụ ihe omume na oghere nzukọ. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na BlossomHouston.com, Ma ọ bụ soro anyị na Facebook na Instagram.